Maraykanka oo war cusub ka soo saaray dagaalka Itoobiya
Hadalka Maraykanka ayaa ku soo beegmaya xilli Ra'iisal wasaare Abiy Axmed uu ka soo muuqday furimaha dagaalka ka dhanka ah TPLF.
Nin Hargeysa loogu xiray eey qaali ah oo uu gaari jiidhsiiyay!
Booliska magaalada Hargeysa ayaa xabsiga dhigay nin loo haysta inuu gaarigiisa jiirsiyay eey.
TOOS Wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka Itoobiya xilli ciidamada dowladda ay sheeganayaan inay deegaano ka qabsadeen TPLF
Ku soo dhawaada tebinta tooska ee BBC Somali
Haweeneydii Masar u dhalatay ee Israa'iil u basaasi jirtay
Inshiraax ayaa kamid ahayd basaasiinta ugu caansan bariga dhexe, waxaana Israa'iil ay gacan sirdoon oo muhiim ah ka siisay wixii ka dambeeyay dagaalkii 1967, ka hor inta aysan sanadkii 1974 qaban mukhaabaraadka Masar.
Faransiiska Iyo UK ayaa hawada isu marinayay farriimo qaraar tan iyo markii Britain iyo Mareykanka ay heshiis la galeen Australia, waxaana xaaladda uga sii daray wadahadal dhex maray hoggaamiyeyaasha waddamadani oo bannaanka u soo shaac baxay.
Ra'iisal wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa lagu arkay safka hore furinta dagaalka maalmo ka dib markii uu sheegay in uu dagaalka hoggaamin doono.
Ilhan Cumar oo lagu tilmaamay "argagixiso"
Ra'iisul Wasaaraha Pakistan I`mran Khan ayaa ka hadlay arrin maalimihii lasoo dhaafay hadal-heyn weyn ka abuurtay waddankaas.
Muuqaal, Dawo: Wasiirka amniga Puntland oo si kulul uga hadlay taliyaha diiday inuu xilka wareejiyo
Dood ka dhalatay gabar surwaal iyo shaati ku dhex martay Hargeysa
Listen Next, Xiga Idaacadda Duhurnimo, 13:59, 27 Nofembar 2021, Muddada 30,30
Dhageyso, Idaacadda Subaxnimo, 07:00, 27 Nofembar 2021, Muddada 29,00
Dhageyso, Dunida Iyo Maanta, 16:59, 26 Nofembar 2021, Muddada 1,00,00
Dhageyso, Idaacadda Duhurnimo, 13:59, 26 Nofembar 2021, Muddada 30,30
Qaar ka mid ah xabsi ka baxsashadii hadal haynta dhaliyay
Weli Kenya waxaa laga hadal hayaa dhacadii xabsiga Kamiti ay uga baxsadeen seddax nin oo mid ka mid ah uu ku xukuman yahay 41 sano oo xabsi ah.